China Animal Vitamins Golden Multivitamins Powder supplement ho an'ny biby fiompy rehetra sy ny mpamatsy | Weierli
Akora: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B2, D-Calcium Pantothenate, D-Biotin, asidra nikotinika.
Fonosana: 100g, 1kg, 10kg, 25kg
Fitehirizana: Mitahiry ambany 30 ℃ (mari-pana amin'ny efitrano).
♦ Powder Golden Multivitamins Powder no vokatra tsara indrindra ahazoana vokatra manan-danja amin'ny fiakaran'ny lanjan'ny kalitao sy ny habetsaky ny atody indrindra amin'ny atody mpiompy ary amin'ny fampandehanana ny fiasa biolojika amin'ny vorona.
♦ Amin'ny biby fiompy toy ny omby, rameva, soavaly, ondry ary osy ity vokatra ity dia manana andraikitra lehibe kokoa amin'ny asa ankapobeny sy amin'ny lanjany, mitombo ny ronono arakaraka ny habetsany sy ny kalitaony. Ity vokatra ity dia mihetsika amin'ny fihenan'ny bakteria sy ny viriosy.
♦ Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny biby fiompy isan-karazany toy ny omby, omby, rameva, soavaly, ondry, osy sy karazam-borona rehetra toy ny zana-trondro, fandriana, mpiompy, akoho amam-borona, ary turkey.
♦ Rano fisotro: afangaro amin'ny rano 40L indray mandeha isan'andro ny vokatra 100g.
♦ Tazomy mafy ny sarony mba hihazonana ny fihavaozana. Aza miditra amin'ny ankizy.
Teo aloha: Orinasa mora indrindra China Fenbendazole Premix 4% famokarana Deworm Factory
Manaraka: Sakafo famenon-tsakafo sinoa ambony kilasy famokarana otrikaina Ad3 ho an'ny fahasalaman'ny biby
Vovon-tsivana multivitaminina volamena
fanampiana biby fiompy
Multi vitamina ho an'ny biby
Multivitamins ho an'ny akoho amam-borona
Sakafo famenon-tsakafo ambony any Shina kilasy ambony ...
Vitamina azo tsakotsako
vovoka famokarana rà
Probiotics Tablet ho an'ny biby fiompy